Xaraash iyo Xoolo Jaban: Liverpool oo suuqyada iibka lasoo dhigay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xaraash iyo Xoolo Jaban: Liverpool oo suuqyada iibka lasoo dhigay
(10-11-2018) Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo dhigay sayladda wax lagu kala iibsado, kaddib markii mulkiilaha reer Maraykan ee John W Henry uu go’aansaday inuu dhegaysto dalabyada suurtogalka ah ee uu ku xaraashi karayo.
Henry oo sidoo kale ah mulkiilaha naadiga Boston Red Sox ee haysata horyaalka MLB ee dalka Maraykanka oo dhamaadka bishii hore ay ku guuleysatay, ayaa waxa uu doonayaa inuu soo afjaro muddo uu ahaa mulkiilaha dhabta ah ee Reds oo saamiyo yaryar ay ku leeyihiin shaqsiyaad kale oo uu ka mid yahay xiddiga NBA-da ee LeBron James.
Sida uu qoray wargeyska New York Post, Henry ayaa ku iibinaya Liverpool lacag dhan £1.5 bilyan, waxaana hor yaalla dhawr dalab oo ay shirkado iyo shaqsiyaad usoo gudbisteen oo midkooda qanciya uu go’aamin doono inuu ku wareejiyo.
Sannadkii 2010 ayaa uu maalqabeenkani ku iibsaday Liverpool lacag dhan £342 milyan, laakiin waxay samaysay sare u kac weyn oo kor u qaadday qiimihii ay ka taagnayd suuqa.
“Wuu iibinayaa haddii uu ku helo qiimo sax ah” Sidaas ayuu wargeyska New York Post kasoo xigtay shaqsi u dhow Henry oo haya xaqiiqada iyo go’aanka mulkiiluhu ku doonayo inuu lacagaysto kooxda.
Bishii August ee sannadkan ayaa la sheegay in maal-qabeenka reer Abu Dhabi ee Sheik Khaled Bin Zayed Al Nahayan uu sannadkii 2017 la xidhiidhay Henry si uu uga iibsado kooxda Liverpool, hase yeeshee wada-xajoodkii lagu guuleysan waayey.
Shirkadda Fenway Sports Group ee uu leeyahay Henry, ayaan wax jawaab ah ka bixinin warkan, hase yeeshee soo laabashada dhawrka jeer ee ah in la xaraashayo Liverpool ayaa ka dhigan in ugu yaraan uu Henry dhegaysanayo dalabyada.